Nsogbu Na "Enweghị asịsa" | Martech Zone
Wednesday, December 2, 2009 Sunday, October 4, 2015 Chris Lucas kwuru
Enweghị asịsa abụrụla ihe mkpuchi mkpuchi nke ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu jiriworo dịka ọta mgbe ọ bụla akụkọ ọjọọ ma ọ bụ nyocha ọha na eze bilitere. N'ụwa ochie ebe ndị mgbasa ozi weere mgbasa akụkọ dịka ozi ọma na ebe ụlọ ọrụ nwere ike ijikwa ozi ahụ Enweghị asịsa rụrụ ọrụ iji zụta ụlọ ọrụ ahụ oge ụfọdụ.
taa, Enweghị asịsa anaghị arụ ọrụ. Jụọ Tiger Woods. Ngwaọrụ soshal midia na-enye mmadụ niile ohere ịza ajụjụ. Ọ pụtara na ọ bụrụ na gị ma ọ bụ azụmahịa gị anaghị ezute isi akụkọ nwere ike imebi, ndị mmadụ na Twitter, blọọgụ, ihe ngosi "akụkọ" 24-Hour na-ekepụta okwu maka gị. Ha na-ekwupụta ozi ahụ ma na-emekwa ka ihe sikwuoro ike ijikwa na esemokwu na ya.
Nsogbu na Enweghị asịsa ọ bụ na ị na-ejikarị eme a ọha Mea Culpa agbanyeghị, nke a na-ekpuchikarị site n’ịkọ nkọ, asịrị na innuendo, nke ndị mmadụ mebere n’enweghị eziokwu niile.
Yabụ dị ka azụmaahịa na-eche maka oge ọzọ ị ga-eche ọnọdụ nsogbu nsogbu ihu, ị nwere ike Enweghị asịsa ma cheta, ndị ọzọ ga-aza ajụjụ… ma ị nwere ike tufuo ike ọ bụla iji nweta ezigbo akụkọ ahụ mgbe ị dị njikere.
Tags: prmmekọrịta ọhaneze
Dec 4, 2009 na 12:00 PM
“Ọ dịghị okwu ọ bụla” abụwo nzaghachi nganga. Ihe ndị PR mụtara kemgbe ọtụtụ afọ na ọ bụghị ezigbo azịza. Mana ekele na soshal midia, onye ọ bụla na-ahụzi mpako ahụ na ọ gaghị ediri ya dịka ha siri eme.